RW Cumar oo Si Adag u Canbaareeyay Weerarkii ay Al-shabaab ku Qaadday AMISOM – Radio Daljir
RW Cumar oo Si Adag u Canbaareeyay Weerarkii ay Al-shabaab ku Qaadday AMISOM
Seteembar 2, 2015 1:56 b 0
Arbaco, September 02, 2015 (Daljir) —Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii lagu qaaday xero ay deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Nabad illaalinta ee AMISOM, kuna taala degmada Jannaale ee gobolka Sh/hoose.
“Waxaan cambaareyneynaa weerarka kooxaha nabad diidku ay ku qaadeen ciidamada nabad illaalinta ee AMISOM, waxaana tacsi u dirayaa qoysaskii ay ka baxeen ciidamada naftood hurayaasha ah” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo sidoo kale tacsi u diray dowladda Uganda ee ay ka socdeen ciidankaasi naftooda ku waayay difaaca iyo xasilinta dalkeena Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa mar kale yiri.
“Qorshaheenu waa in dalka laga sifeeyo haraadiga kooxahaasi caadeystay daadinta dhiiga ummada, waana muhiimada koowaad ee Xukuumadeyda sidii looga ciribtiri lahaa goobaha yar ee ay weli ku harsan yihiin”.
Qaar kamid ah Dhaqaatiirta Afrika oo Shir ku leh Mombasa